မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး၏ လျှို့ဝှက်ချက်ငါးခု | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး၏ လျှို့ဝှက်ချက်ငါးခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူအများ စုဟာ မိုဘိုင
်းဖုန်း တစ်လုံး ရဲ့အသုံးဝင်မှု လျှို့ဝှက်တွေကို သိရှိသူတွေ အလွန် နည်းပါး နေပါတယ်။ ကိုင် နေတဲ့လူ အများစုဟာ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို အများအားဖြင့် Camera, Music, Bluetooth, FM, Radio, Alarm နဲ့ Game အစရှိတာ တွေလောက်သာ အသုံးပြုနေကြတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီထက် ပိုပြီး အသုံးဝင်မှုနဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်အနည်းငယ် ကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
(၁) အရေးပေါ် ကွန်ယက်ရှာရန် Keypad ကို Locked လုပ်ထား ရင်တောင် မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာ ၁၂၂ ဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုနှိပ်လို့ရတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနံပါတ်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ ဆက်သွယ်မှုဧရိ ယာထဲမှာရှိရင် ဒီနံပါတ်ကိုနှိပ် လိုက်တာနဲ့ဖုန်းဟာအနီးဆုံးဆက်သွယ် မှုကွန်ရက်ကိုအလိုလျောက် ရှာမှာဖြစ်ပါ တယ်။ဒီနံပါတ် ဟာ မိုဘိုင်း ဖုန်းရဲ့ခလုတ်တွေကိုပိတ်ထားရင်တောင်နှိပ်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဘက်ထရီအရေးပေါ်အားကုန်ရင် မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာ ဖုန်းအသုံး ပြုရင်း ဘက်ထရီအားနည်း လာပြီဆိုရင် *3370# ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းတွေမှာ အရေးပေါ်သုံးဖို့ချန် ထားတဲ့ ဓာတ်အားကိုပြန်ဖွင့်ပေးမှာ ဖြစ်လို့ ဖုန်းမှာ ဘက်ထရီထက်ဝက်အားပြန်ပြည့်လာတာကိုတွေ့ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ် မိုဘိုင်းဖုန်းဘက်ထရီအားပြန်ဖြည့် တဲ့အခါမှာ သာမာန်နဲ့အရေးပေါ်သုံးနှစ် မျိုးလုံးအတွက် ဘက်ထရီ အားကို အလိုလျောက်အားပြန်ဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ လူ အများစုအတွက်အသုံးဝင်စေမယ့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ကားသော့ကျန်ခဲ့ရင် အဝေးထိန်းစနစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ကား အသုံးပြုသူတွေအတွက် ကားထဲ မှာသော့ကျန်ခဲ့ခြင်း၊ အပိုသော့တစ် ချောင်း အိမ်မှာကျန်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပေါ်ကြုံလာပါက မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး ရှိရုံနဲ့ အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
အသုံးပြုပုံ ကတော့ အိမ်မှာရှိ တဲ့လူတစ်ယောက် ဖုန်းကိုမိမိမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့လှမ်းခေါ်ပြီး တစ်ဖက်လူနဲ့ အဆက်အသွယ်ရရင် အိမ်ကလူကို ကားသော့ဖွင့်တဲ့ ခလုတ်ကို ဖုန်း အနားကပ်ပြီးနှိပ်ခိုင်းလိုက်ရုံနဲ့ကားတံခါးပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဖုန်းကိုတော့ကားနားမှာ ထားရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းဟာမိမိအတွက် ပင်ပန်းမှုမရှိစေဘဲ အဆင်ပြေစေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(၄) မိုဘိုင်းဖုန်းအခိုးခံရရင် မိမိရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဟာ ကျပျောက်ခြင်း၊ မေ့ကျန်ခြင်းနဲ့ အခိုးခံရခြင်းအစရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ပျောက် ဆုံးသွားလို့ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် အဲဒီဖုန်းကတ်ကိုဖျက်ဆီးပစ် လို့ရပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဖုန်းရဲ့နံပါတ်စဉ်ကိုသိဖို့ *#06# ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ ဂဏန်း(၁၅)လုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ဂဏန်းတွေဟာ မိမိဖုန်းရဲ့သီးသန့်နံပါတ်တွေပါ။ ဒီဂဏန်းတွေကို ပထမဆုံးသိရှိ ထားဖို့တော့လိုအပ်မှာပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နေ့မှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကို ဖုန်းဆက်ပြီးကုတ်နံပါတ်ပြော၍ ဖုန်းပိတ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခိုးသူဟာSimcard ကိုမထုတ်ရသေးခင်တိုင်တန်းမယ်ဆိုရင် Simcard ရော ဖုန်းကိုပါ Disable လုပ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ မိမိဖုန်းထဲက ဖုန်းနံပါတ် စာရင်းတွေကို တခြားသူမသိအောင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Nokia ရဲ့ဖုန်းကုတ်နံပါတ်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ ကုတ်နံပါတ်တွေ ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူညီမှုမရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Nokia ဖုန်း အသုံးပြုမယ့်သူတွေအတွက် ကုတ်နံပါတ်တွေ ကို ဖော်ပြပေး လိုက် ပါတယ်။ ကုတ်နံပါတ်တွေအနေနဲ့ IMEI (International Mobile Equipment Identity) ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ *#06# ကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
LCD Display ကိုပိုပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်ချင်တယ်ဆို ရင် *#67705646# ကိုနှိပ်ပြီး ကြည့် ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမှာအသုံးပြု ထားတဲ့ ဟန်းဆက်ရဲ့ ဆော့်ဖ်ဝဲ Version ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ *#0000# ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Bluetooth device တွေရဲ့တည်နေရာကို ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် *#2820# ကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်၊ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Serial Number နဲ့ ဖုန်းကိုနောက်ဆုံး ဘယ်အချိန် မှာ ပြုပြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ဖုန်း lifetime ကိုသိရှိလိုရင် တော့ *#92702689# ကိုရိုက်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်သားထားသော ဖုန်းနံပါတ် များကို ချေဖျက်ချင်ပါက *#3925538# ကိုနှိပ်ပြီးဖျက်နိုင်ပါတယ်။ Serial 60 ဖုန်းတွေအတွက်က တော့ *#737092 5538# ကိုနှိပ်ပြီးဖုန်းကို reset lock လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖုန်းပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ defult code 12345 ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် ဖုန်းပြန်ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးအား ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါစေ။
အေးချမ်းမွန်မှ SHADE Journal
တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Photo From :SHADE Journa
This entry was posted on December 8, 2012, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကြောင့် မိတ်ဆွေချင်းခွဲခွါရ
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းနည်း(သို.)တရားဥပဒေစိုးမိုးေ၇းနှင့်လူနည်းစုအပေါ် လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းကိုတည့်တည့်ကြည့်ခြင်း (ဒုတိယပိုင်း) →